Tusmada NAO Wejiyo wanaagsan oo taban | Saadaasha Shabakadda
Tusmada NAO Wejiyada wanaagsan iyo kuwa taban
A. Esteban | | Cimilada
Como hore ayaan u soo bandhignay, xoogga NAO waxaa lagu sharaxay tilmaanta NAO. Tusmada NAO waa farqiga u dhexeeya cadaadiska heerka badda inta udhaxeysa laba xarumood oo kuyaala agagaarka xarumaha hoose ee Iceland iyo buuraha Azores. Stykkisholmur (Iceland) waxaa loo isticmaalaa saldhigga waqooyiga, halka Ponta Delgada (Azores), Lisbon (Portugal) iyo Gibraltar loo isticmaalo saldhigga koonfureed.
La wajiga wanaagsan ee tusmada NAO qaar ka mid ah ayuu soo bandhigayaa cadaadiska ka sarreeya sida caadiga ah meelaha sarsare ee ku-meel-gaarka ah kana hooseeya cadaadiska hooseeya ee Badweynta Atlantik. Kordhinta kala duwanaanta heerkulka waxay keeneysaa duufaanno jiilaal oo soo noqnoqda oo daran oo ka gudba Badweynta Atlantik, iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq xagga woqooyi ah Sidaas awgeed, waxaa jira jiilaal kulul oo qoyan oo Yurub ah iyo qabow iyo qabow ku yaal Kanada iyo Greenland. Xaaladdan oo kale, bariga Mareykanka waxay la kulmaan xaalado qabow oo qoyan. Tusaale ahaan, heerarka jiilaalka / guga sare ee 1989, 1990 iyo 1995 waxaa sababay barakicinta hawada saafiga ah ee Arctic iyo Iceland ilaa suunka subtropical ee u dhow Azores iyo Jasiiradda Iberian, iyo dabeylaha galbeedka galbeed ayaa sii xoogeystay Waqooyiga Badweynta Atlaantik. Dabaylaha kale ee ka xoogan galbeedka waxay keenaan hawo badan oo qoyan qaarada qaarada yurub waxayna keeneysaa qaboobaha badda oo ka khafiifsan.
La wajiga xun ee tusmada NAO muuji a xarunta cadaadiska sare ee subtropical daciifka ah iyo sidoo kale xarunta daciifka ah ee Icelandic ee cadaadiska hooseeya. Wejiga cadaadiska ee yaraaday wuxuu keenaa in yar, qulqulka socodka oo daciifa oo ku sii socda waddo galbeedka-bari ka badan. Waxay u qaadaan hawo qoyan badda Mediterranean iyo maqnaanshaha qulqulka qulqulaya ee ka imanaya galbeedka ilaa bariga, hawada qabow ee Siberia waxay hoos ugu dhici kartaa latitude aad u hooseeya, sidaa darteed baraf badan oo soo noqnoqda ayaa ka dhici kara koonfurta Yurub. Si kastaba ha noqotee, Greenland waxay leedahay heerkul qabow qabow. Heerarka jiilaalka / guga oo hooseeya ee 1917, 1936, 1963, iyo 1969 waxay qabeen waqooyiga badweynta Atlantik ka hawl yar oo u dhiganta qabowgii-caadiga ahaa ee Yurub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Cimilada » Tusmada NAO Wejiyada wanaagsan iyo kuwa taban
mahadsanid, aad u xiiso badan!
Qaab dhismeedka Hawada (I)